AFAR su’aalood oo XASAASI ah oo ku socda Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir?? | Hadalsame Media
Home Maqaallada AFAR su’aalood oo XASAASI ah oo ku socda Guddoomiyaha cusub ee Gobolka...
AFAR su’aalood oo XASAASI ah oo ku socda Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir??
(Hadalsame) 30 Agoosto 2019 – Guddoomiyaha cusub wuxuu yiri Wadooyinka oo dhan waa isku furayaa anagoo og halista amni. Fadlan su’aalahaan cidii taqaana Guddoomiyaha ha iga gaarsiiso!!!
1 – Dadka, Jaamka Faylka dheer iyo Busteejooyinka kala wareega keebaa u roon?
2 – Mise labadaba waa la iska dhaafaayaa oo askarta waa laga qaadayaa jidadka Magaalada oo dhan gaar ahaan baraha koontarool?
3 – Haddii la yiraahdo kala wareega gaadiidka oo busteejooyin loo kala cayimay loo sameeyey waxaa meesha soo galaya in JAAM badan dhaco oo safaf dhaadheer gaadiidku galaan kadibna mid mid loo hubiyo, haddii taasi dhacdana qofkii saakay baxay habeenkii ma gaarayo meeshuu rabay?
4 – Mida kale labadaas Shay haddii la waayo oo Magaalada isku furan laga dhigo oo ciidamada guud ahaan baraha koontarool laga qaado maxaa dhici kara?
Hadda qaabka Waddooyinka caasimadu u shaqeeyaan dad badan ayaa ku qanacsan, marka loo eego ciriiriga ka imaan kara haddii la yiraahdo koontarooladaas gaadiidka oo dhan inta la isku furo mid mid halloo baaro.
Qorshaha sadexaad oo aan macquul ahayn waa in guud ahaan koontaroolada caasimada la burburiyo ciidamadana laga qaado oo sidaas Magaalada Gees ka Gees isku furan u noqoto.
Xusuusnoow: Guddoomiyaha cusub dariiq sadexaad uma furna oo aan ahayn in safaf dhaadheer gaadiidka ku galaan Baraha koontaroolada ciidamada si loo hubiyo ama qaabka hadda caasimadu u shaqeyso.
Waxaa Qoray: Maxamed Firxad
Previous articleRASMI: DF Somalia oo ku dhawaaqday in Dhuusamareeb la gaynayo Ciidamada AMISOM
Next articleDalkee ka socdaan Ciidamada AMISOM ee Dhuusamareeb la gaynayo?? (Ciidamo gaar ah oo halkaa gaarey)